युगसम्बाद साप्ताहिक - जिम्मवारीबोधको अभाव
Wednesday, 04.08.2020, 04:08am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 11.11.2014, 12:55pm (GMT+5.5)
राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ भन्ने उदाहरण जताततै प्रशस्तै पाइन्छ । बजार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सार्वजनिक प्रशासन हरेक क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त कमजोर छ । यी विषयहरू राज्यले अधिकतम प्रभाव विस्तार गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको बाहुल्य छ । यसले गर्दा जनताले सुलभ रुपमा सहुलियत, भरपर्दो, गुणस्तरीय र सुरक्षित सेवा पाउन असमर्थ भैरहेका छन् । यस्तैमा पर्दछ यातायात क्षेत्र । यातायात क्षेत्रमा सरकारी उपस्थिति नभएको र यसको कानुन तथा नियमहरू पनि भरपर्दो र समयानुकूल नभएका कारण मनपरीकै बढोत्तरी भैरहेको छ भने चरम भ्रष्टाचार पनि मौलाइरहेको छ । यसले गर्दा व्यावसायीलाई नाफा चाहिने, सरकारी कर्मचारीलाई पनि जसरी हुन्छ पैसै चाहिने स्थिति छ । यसले गर्दा यातायात क्षेत्र असुरक्षित बन्दै गएको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले त्यो सिद्ध पनि गरेको छ । विशेषतः सवारी चालक अनुमतिपत्र, सवारी साधन संचालनको रुट इजाजत तथा यात्रुको क्षमताका विषयमा सरकारी निकायले आँखा चिम्लिदा नेपालमा सडक यातायात अत्यन्त असुरक्षित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षमा २ हजारजतिले ज्यान गुमाउँछन् । यसमा चाड पर्वका बेला दुर्घटनाका संख्या बढी हुने गरेको छ । त्यसैले त दशैंयता मात्र ३०० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए । यस्तोमा अब कसरी जनताको जीउधनको रक्षा गर्ने र राजमार्ग कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने चिन्ता सदनदेखि सडकसम्मको बहसको विषय बनेको छ । दुर्घटना टार्न सकिन्न तर कम गर्न भने सकिन्छ । यान्त्रिक, प्राकृतिक कारणबाट हुने दुर्घटना टार्न नसकिने भए पनि मानवीय कारणले हुने दर्घटनालाई कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि आवश्यक संयन्त्रको परिचालन र त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन आवश्यक पर्दछ । किनभने नेपालमा सडक दुर्घटनामा अधिकांश चालकको लापरवाही देखिएको छ । ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकले पनि त्यस्तै देखाउँछ । त्यसो भए सडकमा बसेका ट्राफिक प्रहरी के हेरेर बसिरहेका छन् त ? आम जनताको मुखमा यस्तै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
आजभोलि प्रहरीको मुख्य काम भनेको साँझपख चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको छ कि छैन भनेर जाँच गर्ने हो । यो काम ठूला शहरहरूमा बढी मात्रामा हुन्छ । राजमार्गहरूमा यस्तो काम कमै हुने रहेछ भन्ने दृष्टान्त अनेक फेला परेका छन् । केही दिन अघि मकवानपुरमा भएको बस दुर्घटनामा चालकले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइयो । उनले बस मालिकसंगको झगडालाई साम्य पार्न रक्सी सेवन गरेको र रक्सीको सुरमा बस चलाउँदा विपरीत दिशाबाट आएको बससंग ठोक्किन पुग्यो । प्रश्न कहाँ हो भने चितवनको रामनगरमा मापसे गरेका चालक त्यति टाढासम्म कसरी पुग्यो ? राजमार्गमा तगारो हालेर बसेका प्रहरीले मापसे गरेका चालकले चलाएको बस कुन आधारमा हुइकिन दिए ?
यसको सहज उत्तर छ– भ्रष्टाचार । कुनै पनि बस वा सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा जाँचमा बसेका प्रहरीका खल्तीमा केही सय रुपैयाँ हालिदिएपछि उसको सुरक्ष्मा जाँच सम्पन्न हुन्छ । मकवानपुरमा भएको पनि त्यही हो । अब कारवाही कसलाई त ? बसका चालकमाथि ज्यान मुद्दा चलाइएको समाचार आयो । उनलाई त्यहाँसम्म बिना रोकटोक जानदिने प्रहरी कारवाहीको दायरामा आउनुपर्छ कि पर्दैन ? नेपालको सडकको अवस्था, चालकको लापरवाही, सवारी धनीको जसरी पनि पैसा धेरै कमाउने लोभ, यात्रुहरूमा चेतनाको अभाव, सुरक्षाका लागि बसेका प्रहरीमा रहेको केही पैसाको लोभ दुर्घटनाका कारण हुन् । अहिले ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम पालना गराउन अनेक अभियान चलाइरहेको छ । शहरी क्षेत्रमा चल्ने यस्ता अभियानले सोही क्षेत्रमा हुने दुर्घटनालाई कम गराएकोमा कुनै शंका छैन । लेन अनुशासन कायम नगर्नेलाई तत्काल परामर्श दिने गरिएको छ । मापसे जाँचले उपत्यका लगायत ठूला शहरी क्षेत्रमा हुने दुर्घटना र मृत्युको आँकडा ९० प्रतिशत कम भएको छ । तर राजमार्गहरू निकै असुरक्षित देखिएका छन् ।
नेपालको सवारी ऐन निकै पुरानो भएका कारण पनि दुर्घटना भैहालेमा चालक सार्वजनिक अपराधमा पर्ने र सवारी धनीले क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण अत्यधिक गतिमा गाडी चलाउनु, क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार्नु दुर्घटनाको प्रमुख कारण देखिएको छ । यसकारण अब राजमार्गहरूमा हुने दुर्घटना कम गर्न सवारी साधनको गति नियन्त्रण गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । त्यस्तै २०० किलोमिटरभन्दा लामो दुरीमा चल्ने सवारीका लागि दुईजना चालक राख्ने अनिवार्य नियमको कडाईका साथ पालना गर्नु पर्दछ । काठमाडौंदेखि काकडभिट्टासम्म एकै चालकले लैजाँदा दुर्घटनाको सम्भावना बढी देखिन्छ । गन्तव्यमा पुग्नै लागेका बेला बस दुर्घटना हुने गरेको धेरै घटना छन् । सवारी नियम कडा बनाएर दुर्घटना गराउन चालक र सवारी धनीको हात देखियो भने त्यतिबेला हदैसम्मको कारवाही गर्ने र बिमा दावी गर्न नपाउने नियम अहिलेको अनिवार्य शर्त हो । त्यस्तै सडकमा सुरक्षा जाँच गर्न बसेका प्रहरीहरूले बिना जाँच केही सय रुपैयाँ लिएर ओभर लोड, यान्त्रिक गडबडी भएका, मापसे गरेकालाई छाडेको पाइएमा त्यस्ता प्रहरीलाई पनि समान कार्वाहीको व्यवस्था हुनु अनिवार्य भैसकेको छ ।